Winston Salem — Steemit
goldbloger8 (34)in #artzone •3years ago
အကူအညီရှာနေပိုများသောအိမ်ထောင်သည်အခြားမည်သည့်ခေတ်မီစာအုပ်ထက်ဂယ်ရီချပ်မန်းရဲ့ဧရာအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်5မတ်ေတာသဘာသာစကားများကနေရှာပါပြီ။ မကြာသေးမီက Winston Salem, မြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှတိတ်တဆိတ်ပြောပြီသင်းအုပ်ဆရာများနှင့်တိုင်ပင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရန်သူ၏အာရုံကိုလှည့်။
လောလောဆယ်အဲဒီမှာရောဂါနှင့်အတူ6သန်းအမေရိကန်တွေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးဒီဇင်ဘာ7လေ့လာမှုအရသိရသည်ကြောင်းအရေအတွက်ကို 2060. အားဖြင့်ပိုပြီးအသက် 15 သန်းအထိနှစ်ဆထက်မှခန့်မှန်းနေသည်သူတို့၏အမျိုးအတျောမြားမြားဖြစ်ကြပြီးထိုကာလအနည်းဆုံးအပိုင်းဂရုစိုက်လိမ့်မည် ၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်။ TIME ကအမှတ်တရများအရောင်မှိန်အဖြစ်မတ်ေတာသညျအသကျရှငျ Keeping, အယ်လ်ဇိုင်းမားနဲ့မိတ်ဖက်များနှင့်သူဒက်ဘီဘားနှင့်ဒေါက်တာအက်ဒွပ်ကို Shaw နဲ့အတူပူးတွဲရေးသားခဲ့ပါတယ်စာအုပ်မေတ္တာရှင်၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းကိုချပ်မန်းမေးမြန်းထားသည်။
TIME က: အဘယ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအယ်လ်ဇိုင်းမားသို့မဟုတ်နှောက်၏အချို့ကြင်နာရရှိသူများရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာများကိုဘာတွေလဲ? ဂယ်ရီချပ်မန်း: ငါအကြီးမားဆုံးအရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကျဆင်းမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်လည်လှည့်များ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိနေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအဖြစ်မှန် facing မှလာသောဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆင်းသွားရဲ့။ ငါ၏အ Co-စာရေးဆရာများထဲမှတစ်ဦး, ဒေါက်တာရှောစောစောအဆင့်စုံတွဲများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်သူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏အချစ်ဘာသာစကားရှာဖွေတွေ့ရှိကူညီပေးသည်။
ရောဂါဖြစ်စဉ်များကို၎င်း, မိတ်ဖက်မှာအားလုံးတုံ့ပြန်လို့မရပါသကဲ့သို့, သူသည်ငါအပေါ်၌ထိုင်သောစောင့်ရှောက်သူများ, များအတွက်အုပ်စုများအာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ ငါလူတစ်ဦးကသူတို့ကိုပြန်ချစ်စေခြင်းငှါမတတျနိုငျသောအချက်ကိုကြားမှ, သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၎င်းတို့၏ကတိကဝတ်တွေနဲ့နက်ရှိုင်းစွာသဘောကျခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ငါ့ထံသို့မယ့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၏အပြုအမူကိုလုံးဝဇာတ်ကောင်ထဲကဖြစ်သည့်အတွက်ပုံပြင်များ၏ဝမ်းနည်းမှုကိုနားထောငျဖို့။ ဒါကြောင့်အရှိဆုံးစိတ်ပျက်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူဘယ်နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူအပေါင်းတို့သည်လမ်းအဆုံးကဖြစ်စေအပ်သလော ကိန်းဂဏန်းများရှိပါတယ်လျှင်ငါမသိရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အာရုံအုပ်စုများ၏တဦးတည်းရှိသူ၏ဇနီးနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်မသိသူတစ်ဦးအငယ်ကောင်လေးရှိ၏။ သူမ၏အပြုအမူကိုသူအမှန်တကယ်သူမ၏ left, သူသိလိုက်ရတယ်သောအခါထိုကြောင့်ရောဂါခဲ့, သူမ၏မဟုတ်ခဲ့သဘောပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့နောက်သူသည်ပြန် လာ. ဒါကြောင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့သူကပြန် လာ. , ခရီးမှတဆင့်သူမ၏နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ဖို့ကျူးလွန်ခဲ့သော။ သငျသညျသူတို့ကအများကြီးပေါ်ယူနိုင်မည်ထင်နှင့်သူတို့တစ်တွေစက်ရုံအတွက်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မခံစားရဘူးအဘယ်သူနည်းပဲတက်သည်မဟုတ်သောလူများ, အဘယျသို့ဆိုကြ ငါစာနာမိပါတယ်။ သငျသညျပိတ်မိခံစားမိကြဘူး။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ငါစက်ရုံအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချပြီးသူတို့နှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခါအချိန်ရှိလာပါသည်ထင်ကြဘူး။ သို့သော်သင်သည်ဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့ရှိသည်မဆိုလိုပါ။ ကျနော်တို့ကကတိကဝတ်ကိုဖန်ဆင်းသောအခါ "ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့," ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှဒီမျှော်လင့်။ ဒါဟာတကယ်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကိစ္စင်: သင်လုပ်သောကတိကဝတ်ဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သွားပါသလား? မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အိမ်သို့သူမ၏မောင်းထုတ်ရန်သူမ၏ခင်ပွန်းကမေးတယ်, သူရှိတယ်ရရှိသွားတဲ့သည့်အခါသူမသည်ကားထဲတွင်လူကိုသူသည်သူမ၏ပြောပြရန်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်တောင်းသောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့စာအုပ်တစ်ဦးပုံပြင်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကအိမ်ထောင်ဖက်ပြောပါလိမ့်မယ်: ကိုသူတို့ပင်အဘယ်ကြောင့်ငါကဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို, ငါဖြစ်၏တဲ့သူကိုသိမထားဘူးဆိုရင်? သူတို့စက်ရုံ၌ထားတော်မူ၏အထူးသဖြင့်အပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, လူတွေကိုအဘယ်ကြောင့်ငါလာရောက်လည်ပတ်သွားသင့်ဟုပြောလိမ့်မည်နည်း သူတို့ကပင်ငါဖြစ်၏သူကိုမသိရပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးသူတို့နေဆဲစိတ်ခံစားမှုမေတ္တာတော်ကိုခံစားရရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်: ဒါပေမယ့်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ငါ့မြေတပြင်လုံးစာစောင်၏စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရသူခံစားရရန်: ထိုသူတို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာထားဖို့လိုကအနက်ရှိုင်းဆုံးစိတ်ခံစားမှုလိုအပ်သောလူသားမြားရှိပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနဲ့သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုကာစိတ်ခံစားမှုလမ်းအတွက်သူတို့ကိုမထိဖို့ကြိုးစားမှရှာအံ့သောငှါလာသောအခါဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်တဲ့အကြီးအဝန်ဆောင်မှုလုပ်နေတာ။ သင်ညာဘက်အရာလုပ်နေတာသိသောကြောင့်ဒါပေမယ့်လည်းသင်တို့အဘို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့အဆုံးမှာ, သင်လုပ်နိုင်သမျှကို ပြု. , ခံစားမိတာပေါ့။ သငျသညျငါထင်စိတ်ကျေနပ်မှု၏နက်ရှိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးသည်ကြောင်းကိုအကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်။ စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုရတဲ့ပြီးနောက်ယူသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကဘာတွေလဲ? [သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်] နေဆဲသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကောင်းတစ်ခုနည်းနည်းရှိပါတယ်အခါအစောပိုင်းအဆင့်အတွက်တိုင်ပင်ထွက်ရောက်ရှိဖို့, နှင့်သင်၏အပြင်ဘက်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးနှစ်ဦးကိုအကူအညီတောင်းအခြေအနေကအကဲဖြတ်ရန်ကြကုန်အံ့။ သင်ယခုသင်တို့ကိုလမ်းဆင်းလာမယ့်ရဲ့အဘယ်အရာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီစေခြင်းငှါ, အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းပြောဆိုနေကြတယ်ဘယ်မှာကြည့်ပါ။ အဘယ်အရာကိုအရေးကြီးပါတယ်သင်တို့တွင်နှစ်ခုအကြားကဒီစိတ်ခံစားမှုလည်စည်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာအဲဒီအစောပိုင်းအဆင့်၌, စုံတွဲသူတို့ကရောဂါသိလိုက်ရတယ်မီကပင်ရှိခဲ့ထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာစိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သိသာသောအရာတို့ကိုသွားအဖြစ်, လူတစ်ဦးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြန်အလှန်ဖော်ဆောင်ရန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မပေးပါ။ လူနာသူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၏မျိုးကနေမရှိတော့အမြတ်အစွန်း, ခရီး၏ကျန်မှတဆင့်သင်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်ရှိရာအရပ်ရရှိသွားတဲ့အခါသင်တို့၏နှစ်ခုပြင်ပမှာတစ်စုံတစ်ဦး, ထို့နောက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ဖြစ်လာသူတစ်ဦးရှိသည်။ ငါ့ကိုရန်, သောစံပြအခွအေနေပါတယ်။ ပြီးတော့? ရောဂါနှင့်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်တဲ့အခါသင်ကအသိအမှတ်ပြုရန်ဒါကြောင့်နောက်ကိုလိုက်မည်ဘုံလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. သင်သည်တတ်နိုင်သမျှကိုလေ့လာပါ။ မှားမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း, ဥပမာ: သူတို့အစ်ကိုများအတွက်အိမ်ထောင်ဖက်သကဲ့သို့သင်တို့မှားယွင်းလျှင်, သင်ပြီးသားကြောင်းဖြစ်ပျက်သောအရာတစျခုဖွင့်ကိုငါသိ၏။ သူတို့မိနစ် 30 အတွင်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုခြောက်ကြိမ်ထပ် start လျှင်သို့မဟုတ်, သင်ကအသိအမှတ်ပြုရန်။ သင်ကရောဂါရဲ့အကိုသိသောအခါ, သငျသညျ ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်စာနာဖြစ်ပါတယ်။ စန်ဒရာနေ့ O'Connor ရဲ့အခါဆင်းရဲသော SP ကဲ့သို့အချို့က high-profile ကိုအမှုပေါင်းရှိခဲ့သည်
aakuuaanye sharnay po myarrsaw aainhtaungsai aahkyarr mai sany hkayatme hcaraote htaat gaalre hkyaut maann rae erar aaraunggrasonehcaraoteaahpyit5maat aytar s bharsarhcakarrmyarr k nay shar parpye . makyaarsayymek Winston Salem, myawwat kar ro line narr mha tatetasate pyawwpye sainnaotesarar myarr nhaint tinepain aaall jine marr raan suueat aarrone ko lha ny . lawlawsaal aelldemhar rawgar nhaintaatuu6saann aamayrikaantway hpyitkyasai ko ၎inn, tait udejainbhar7laelarmhuaar sirasai kyaunggaarayaatwatko 2060. aarr hpyint popyeeaasaat 15 saann aahti nhaits htaat mha hkaant mhaann naysai suuthoeteat aamyoeatyaww myarr myarr hpyitkya pyee hto karl aanaeesone aapine garuhcite lainmai ၎innthoeteat aainhtaunghpaat sai . TIME k aamhaattaramyarr aaraung mhaein aahpyit maat aytar s nyyaas kyashngya Keeping, aaall jine marr nae matehpaat myarr nhaint suu daat bhe bharr nhaint douttar aaat dwutko Shaw naeaatuu puutwal rayysarrhkaepartaal hcaraote mayttarshin eat hceinhkawmhumyarr nhaint pyawshwinmhu aakyaunggko hkyaut maann mayymyanhtarrsai . TIME k:abhaal suueat lotehpawkinehpaatmyarr aaall jine marr shoetmahote nhaout eat aahkyahoet kyinnar r shisuumyarr rainsinenayratae aakyeemarrsone pyaဿnarmyarrko bhartwaylell? gaalre hkyaut maann: ngar aakyeemarrsonearar hcatepinesinerar hcwmrai eat hcaeekamhkyetmyarr sang aainhtaunghpaat kyasainnmhu hcaung kyi hkyinn nhaint paatlai lha eet myarreatahkwngalamtwayko shi naykyasai mahotekyaunggaahpyitmhaan facing mha larsaw wamnaeehkyinn hpyitpartaal htainpartaal . darhar sainn swarr rae . ngareata Co- hcarrayysararmyarr htellmha tait u, douttar shaw hcawhcaw aasaint hconetwalmyarr nhaint aatuu aalotelotetaal suuthoetko nhaint suuthoeteat aahkyit bharsarhcakarr sharhpwaytwaeshi kuunye payysai . rawgar hpyithcainmyarr ko ၎inn, matehpaat mhar aarrlone tonepyan lhoet marapar sakaeshoet, suu sai ngar aapaw htine saw hcaung shout suumyarr, myarraatwat aotehcumyarr aarronehcite htarrpartaal . ngar luutait u k suuthoetko pyan hkyit hcay hkyinn nghaar m t tya nongya saw aahkyetko kyarrmha, suuthoetrae aainhtaunghpaat ၎innthoeteat katikawaat twaynae naat shine hcwar sabhawkya hkaepartaal . i sai ngar htanshoet m ae hcatewainhcarrhpwal hpyitpartaal . darpaymaae laee suuthoetrae aainhtaunghpaat eat aapyuaamuu ko lonew jaratkaung htellk hpyit sany aatwat ponepyin myarreat wamnaeemhu ko narr htaw ngya hphoet . dar kyount aashisone hcatepyethcarar aahcateaapine taithkuhpyitpartaal . luu bhaalnhaityout har suuthoetrae aainhtaunghpaat nhaint aatuu aapaunggthoet sai lamasone k hpyithcay aaut salaw keinganaannmyarr shipartaal shin ngarmasi r parbhuu . darpaymaae aarrone aotehcu myarreat t u taee shi suueat janee naymakaungg hpyithkaesai masi suu tait u aangaalkaung layy shieat . suumeat aapyuaamuu ko suu aamhaantakaalsuumeat left, suu siliterataal sawaahkar hto kyount rawgar hkae, suumeat mahote hkae sabhawpout bharhpyitlhoetlellsotot hthoetnout suu saipyan lar. dar kyount nhaaw ng aayhaat hpyithkaesai . detot suu kapyan lar. , hkaree mhat saint suumeat nhaint aatuu lamshout hphoet kyauulwanhkaesaw . s ngya s nyya suuthoet k aamyarrkyee paw yuu ninemai htain nhaint suuthoet tait tway hcaatrone aatwat ၎innthoeteat aainhtaunghpaat htarr raan loaautpartaal m hkanhcarrr bhuuabhaalsuu naee pell taat sai mahotesaw luumyarr,abh yya shoet sokya ngar hcarnar mipartaal . s ngya s nyya pate mi hkanhcarr mi kya bhuu . darhar kyeemarrtae sonehpyathkyet rae nhang misarrhcuwainmyarr nhaint aatuu swaynway hkaekyaparsai raan loaautparsai . ngar hcaatrone aatwat puggol tait u hkyapyee suuthoet nhang sainthoetabhhoet aakaunggsone hpyitpartaal taeaahkar aahkyane shi larparsai htain kya bhuu . shoetsaw sainsai wayy lamshout hphoet shisai masolopar . kyanawthoet k katikawaat ko hpaansainnsawaahkar " pokaungg shoetmahote posoe bhhoet," kyawantawthoet koabhaalsuu aarr myaha de myahaaw laint . darhar takaal jaratkaung tait u kihc hcain: sain lotesaw katikawaat hpyang nouttaw shoet lite swarr parsalarr? matesway tait u eat aainshoet suumeat maungghtote raan suumeat hkainpwann k mayytaal, suu shitaal rashiswarrtae saeet aahkar suumasai karr htelltwin luu ko suu sai suumeat pyawwpya raan suumeat matesway tait taungg sawsuu aamyoesamee tait u aakyaunggko saint rae hcaraote tait u ponepyin shipartaal . tait u k aainhtaunghpaat pyaww par lain maal: ko suuthoet painabhaal kyount ngar k demhar hpyitkyaunggko, ngar hpyiteat tae suu ko si m htarr bhuusorain? suuthoet hcaatrone htarr tawmuueat aahtuu s hpyintapyee aakyaainpaunggmyarrhcwar, luutwaykoabhaal kyawwng ngar larroutlaipaat swarr sang hu pyaww lain mainaee suuthoet k pain ngar hpyiteat suu ko m sir parbhuu . pahtam u sone suuthoet naysell hcatehkanhcarrmhu mayttartaw ko hkanhcarrr raan ninehcwm shisai: darpaymaae aakyaunggrainn nhaithku shipartaal . ngar myay t pyin lone hcarhcaung eat hcartam hpyitpartaal . hkyitrasuu hkanhcarrr raan: hto suuthoet k hkyithkyinnmayttar htarrhphoet lo k aanaatshinesone hcatehkanhcarrmhu loaautsaw luusarr myarr shipartaal . sainsai hto suuthoet nhaint aatuu aahkyane hpyuann nae suuthoetko saatswal pyawwso kar hcatehkanhcarrmhu lam aatwat suuthoetko m hti hphoet kyaoehcarr mha shar aan saw nghaar lar sawaahkar dar kyount suuthoetko sain taeakyeeawaansaungmhu lotenaytar . sain nyarbhaatarar lotenaytar si saw kyawwng darpaymaae laee sainthoetabhhoet kaunggpartaal . dar kyount aarrlonerae aasonemhar, sain lotenine samyahako pyu. , hkanhcarr mi tarpot . s ngya s nyya ngar htain hcate kyaaynautmhu eat naat shine tae aadhipparal payysai kyaunggko aakyaungg taithkuhku shitaal . hconetwal tait twal tait u rawgar lakhkanartwayko ratae pyeenout yuu saint partaal pahtam u sone hkyaylham k bhartwaylell? [ saineat lotehpawkinehpaat] naysell simyin mhu hcwmrai kaungg taithku naeenaee shipartaal aahkar aahcawpine aasang aatwat tinepain htwat routshihphoet, nhang saineat aapyinbhaattwin taithcone tait u nhait u ko aakuuaanyetaungg aahkyayaanay k aakellhpyatraan kya kone aan . sain yahku sainthoet ko lam sainn lar m ae raeabhaalaarar ko kinetwal hpyayshinn kuunye hcay hkyinn nghaar,abhaalshoet pyu ninesai aakyaungg pyawwso naykyataal bhaalmhar kyany par .abhaalaarar ko aarayykyeepartaal sainthoet twin nhaithkuakyarr k de hcatehkanhcarrmhu lai hcaee ko hcawng shout raan hpyitpartaal . tahkartaranmhar aellde aahcawpine aasaint , hconetwal suuthoet k rawgar siliterataal me k pain shihkae htaat pomo neekauthcwar hcatehkanhcarrmhu saatswalmhu shi nineparsai . shoetsaw sisar sawarar thoetko swarr aahpyit, luutait u ko hkyithkyinnmayttar aapyanaalhaan hpawsaungraan nine par lim maal m payypar . luunar suuthoet twaesoneswaynwaymhu eat myoe k nay mashitot aamyat aahcwann, hkaree eat kyaan mhat saint sain nhang aatuu lamshout ninepartaal shirar aaraut rashiswarr taeaahkar sain thoeteat nhaithku pyinp mhar taithcone tait u, hthoetnout matesway tait u nhaint hpyitlarsuu tait u shisai . ngarko raan, saw hcanpyaahkw aay naypartaal . pyeetot? rawgar nhaint taithkuhku hpyitpyet taeaahkar sain k aasiaamhaatpyuraan dar kyount nout ko lite mai bhone lamkyaunggnhaint paatsaat. sainsai taatninesamyaha ko laelar par . mhar mai war hpyitkyaungg, upamar: suuthoet aaitko myarraatwat aainhtaunghpaat sakaeshoet sainthoet mharywin shin, sain pyeesarr kyaungg hpyitpyet sawarar t hcya hku hpw int ko ngar sieat . suuthoetminait 30 aatwin mimithoet ko ko hkyawwat kyaainhtaut start shin shoetmahote, sain k aasiaamhaatpyuraan . sain k rawgar raeako si sawaahkar, s ngya sanyya po. hpyitninehpwal hcarnar hpyitpartaal . hcaandrarnae O'Connor rae aahkarsainnrellsaw SP kaeshoetaahkyahoetk high-profile ko aamhupaungg shihkaesai
3 years ago in #artzone by goldbloger8 (34)